स्याउका बिरुवा जोगाउनेलाई पुरस्कार ! : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश ६ स्याउका बिरुवा जोगाउनेलाई पुरस्कार !
जाजरकोट । कृषकको जीवनस्तर सुधार गरी आत्मनिर्भर बनाउन मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पाले विशेष योजना सञ्चालन गरेको छ । स्याउका बिरुवा हुर्काउने कृषकलाई आर्थिक सहायतादेखि थप बिरुवा दिनेसम्मका योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले वितरण गरेका स्याउँका ५० प्रतिशत बिरुवा पहिलो वर्ष हुकाउनेलाई प्रतिबिरुवावापत रु १०० दिने नीति बनाएर काम थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दोस्रो वर्ष प्रतिबिरुवा हुर्काएवापत रु ७५, तेस्रो वर्ष रु ५० दिने कार्यक्रम रहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा तल बिरुवा हुकाउने कृषकले कुनै पनि सेवासुविधा नपाउने उनको भनाइ छ । चार वर्षपछि रोपिएका स्याउका बिरुवाले फल दिने योजनाका साथ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको हो । गाउँपालिकाले पहिलो वर्ष मुड्केचुला गाउँपालिकामा २० हजार स्याउका बिरुवा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै दोस्रो वर्ष २५ हजार गरिसकेको छ । तेस्रो वर्ष २५ हजार बिरुवा वितरण गर्ने योजना छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले १२ हजार ५०० टिमुरका बिरुवासमेत वितरणको तयारी छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविताकुमारी रोकायको नेतृत्वमा प्रत्येक वर्षको चैतमा अनुगमनपछि मात्र स्याउका बिरुवा हुर्काएवापत रकम झुक्तानी गर्ने कार्यक्रम हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाले स्याउका बिरुवासँगै हुर्काएवापत पुरस्कार दिएपछि आफूहरु खुशी भएको मुड्केचुला गाउँपालिका–६ का देवबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गाउँमा रहेको स्थानीय सरकारको अनुभूति राम्रोसँग भएको छ, स्याउका बिरुवा आफैँ खरिद गरेर लगाउँदै आएका हामीलाई दुई वर्षदेखि गाउँपालिकाले बिरुवा दिँदै आएको छ, त्यसमा पनि राम्रो हुकाउनेलाई पुरस्कार दिँदा हामीलाई निकै जाँगर आएको छ ।’
त्यस्तै उनजस्तै वडा नं ८ ओक्टका दत्तबहादुर रोकायले भने, ‘पहिलो वर्ष लगाएको स्याउका बिरुवा अहिले तीन वर्ष हुनथाले, अब अर्को वर्ष फल दिन थाल्छ । स्याउ बिक्री गर्दा एकातिर आम्दानी अर्कोतिर हुर्काएवापत पैसा, जे होस् राम्रो भएको छ ।’ यहाँका हरेक गाउँमा कृषकका खेतबारी स्याउका बिरुवाले हरियो भएको छ ।
डोल्पा स्याउ उत्पादनका हिसाबले असाध्य राम्रो मानिन्छ । डोल्पाका स्याउ जाजरकोट, रुकुमपश्चिम हुँदै सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्म बिक्री हुने गर्दछ । आम्दानीको राम्रो स्रोतमध्येको स्याउ यहाँका कृषकको जीवन जिउने मुख्य आधार बनाउका लागि गाउँपालिकाले यो कदम चालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जमिनको वर्गीकरणका साथै हुर्कने ठाउँको आधारमा बिरुवा वितरण गरिएको छ । जाजरकोटको सिमानासँग जोडिएको मुड्केचुला गाउँपालिका तल्लो डोल्पामा पर्दछ । सडक सञ्जासँग जोडिन केही भाग मात्र बाँकी रहेको यो ठाउँ जाजरकोट, रुकुम र डोल्पाको सङ्गमस्थल त्रिवेणीबाट झण्डै चार घण्टा पैदल हिँडेपछि पुग्न सकिन्छ ।
सडक सञ्जालसँग जोड्ने तयारी
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा त्रिवेणीबाट नर्कुसम्म सडक निर्माणको काम शुरु गर्न लागिएको छ । सडक सञ्जालसँग जोडिएसँगै यहाँका कृषकले उत्पादन गरेका स्याउ तथा कृषिजन्य वस्तु सजिलै बजारसम्म पु¥याउन सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
अहिले कृषि सडकको कामसमेत शुरु भएको छ । इलस्थित जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माण तथा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यस ठाउँमा सडक र विद्युत् छिटो पु¥याउनुपर्ने तीन तहका सरकारलाई दबाब छ । केन्द्रीय लाइन (३३ केभी प्रसारण लाइन) विस्तार गर्नका लागि अहिले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१० स्थित चौखामा सवस्टेशन निर्माण शुरु भइसकेको छ । यो निर्माणसँगै मुड्केचुलामा विद्युत् र सडकको काम शुरु हुने भएको छ ।
यहाँ उत्पादन गरिएका वस्तुको निर्यात गर्न र विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सडक निर्माण शुरु भइसकेको प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीले जानकारी दिए । जनताको जीवनस्तर सुधार्नका लागि हामी कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पहाडीको भनाइ छ ।
टिकटकको रहरले परिक्षा रद्द, बोर्डद्वारा सूचना जारी
भक्तबहादुर शाही - February 18, 2021 0
दैलेख । सामाजिक सञ्चालक टिकटकको रहरले गर्दा दैलेखमा एकजना विद्यार्थीको परिक्षा रद्द गरिएको छ । मर्यादा विपरित परिक्षाको समयमा भए गरेका क्रियाकलापलाई टिकटक बनाई...
राउटे युवतिका पिडा : विवाह गर्न मन छ, उमेर पुगेको पुरूष छैन
भक्तबहादुर शाही - February 15, 2021 0
दैलेख । गैरराउटे समुदायले प्रणय दिवस मनाईरहँदा नेपालको सम्पदा मानिने राउटे समुदायकी युवती भने विहेका लागि भने जस्तो पुरुष नपाईने चिन्तामा थिए । प्रेमदिवसबारे...
वडा सदस्यद्धारा बलात्कार प्रयास, पिडितलाई मुद्दा नदिन दवाव
भक्तबहादुर शाही - February 12, 2021 0
दैलेख । बलात्कार प्रयासमा आरोपमा दैलेखमा एकजना जनप्रतिनिधीलाई पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा दुल्लू नगरपालिकाका–५ का निर्वाचित वडासदस्य प्रकाश पोखरेल हुन् । बलात्कार प्रयासमा...
नरेन्द्रसिह कार्की/रासस - May 24, 2020 0
साथीलाई प्रहरीमा जागिर खुवाउन खाेज्ने ८ जना नक्कली परिक्षार्थी पक्राउ
राजधानी समाचारदाता - December 10, 2020 0
कर्णाली । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले अर्काको नाममा परीक्षा दिने आठ नक्कली परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरेको छ । लोकसेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा प्राविधिक जवान सङ्गीततर्फको...
नेपाल कोरोना मुक्त छ, गलत सूचनाको पछाडी नलाग्नुस् : स्वास्थ्यमन्त्री
Breaking News किरण कौशल - February 13, 2020 0
पाल्पा । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइसरको संक्रमण हालसम्म कुनै नेपालीमा नदेखिएकाले नेपाल कोरोना मुक्त राष्ट्रको रहेकाले बताएका छन्...
Exclusive मधुजंग पाण्डे - November 7, 2020 0
काठमाडौं । यसअघि सरकार र जापानबीच कामदार भिसामा नेपालीलाई जापान पठाउने दुई पक्षीय सम्झौता अलपत्र परेको छ । विगत तीन वर्षअघि जापानकालागि कामदार भिसामा...
Breaking News पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस - April 20, 2020 0
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रमा रहेका किरियापुत्री घर कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण बन्द गरिँदा काजकिरियामा असहज भएको किरियापुत्रीले गुनासो गरेका छन् । ...
नागरिकता ऐन संशोधनबारे सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - August 11, 2020 0
काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधनबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको भावना र...
इशा गुप्ताको वाथरुम सेल्फी हेरेर फ्यान मख्ख
Not-to-be-missed एजेन्सी - December 17, 2020 0
मुम्बई । बलिउड नायिका इशा गुप्ता सामाजिक सञ्जालमा बिनकै सक्रिय छिन् । उनी प्राय हट एण्ड बोल्ड फोटो पोष्ट गरेर आफ्ना फ्यानहरुलाई झक्झक्याइरहन्छिन् । हालै...
Editor-Picks नारायण ढुङ्गाना/रासस - July 14, 2020 0
काठमाडौँ । हावाको बेगसँगै भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको बालीनाशक किरा (सलह) विभिन्न जिल्लाबाट प्रवेश गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । असार १३ गते पहिलो...
दीपक आचार्य - February 25, 2021